LMFAO - eyaziwa American electro hop duo, okuyinto yasungulwa ngo 2006 njengoba DJ Redfoo (Redfoo) kanye rapper Sky Blu (Skyler Gordy Phuthuma).
Maqondana nomunye futhi Stefan Skyler hhayi nje amalungu duo noma abangane futhi umphefumulo bomshado - lokhu usitshele igama labo efanayo. Stefan - umalume Skyler sika.
LMFAO: lokhu isifinyezo kule nguqulo?
Izihlobo we ukoma kuhlanganiswe umculo, wanquma ukwenza duo zabo LMFAO, okusho ngokoqobo "Ukuhleka ukuze imbongolo is falling off" (kusukela English. Laughing Ass wami Fucking Valiwe). Alternative translation izifinyezo - "Mina ukuhleka, kangangokuthi ngisho ngiwa ezimbongolo yami." Uma zihunyushelwe indlela isiRashiya, sithola "falling wahleka."
Izingoma eziningi ethandwayo bedle izidakamizwa notshwala. Rumour has it ukuthi abadumile olulodwa, «Du wangenza» lalotshwa Till Lindemann zisesimweni hhayi ngempela anele. Kodwa amazwi athi ingoma kwalotshwa izidakamizwa noma uphuzo oludakayo, iyiqiniso. Ngokuqinisekile wake zenzeka kuwe ukuthi umalume nomshana duo owayemuhle wayebizwa ngokuthi ngakho ngamatshe. Kodwa eqinisweni, kwenzeka izidakamizwa hhayi LMFAO. Ukuhumusha, yebo, ubukeka eyinqaba, kodwa igama duo uzithathe imisuka kusukela kwesinye isiteshi. Omunye Skayler Gordi wakhuluma nogogo wakhe kwi-inthanethi. Sky Blu Kwamhlaba umxhwele kakhulu izincwadi nomzala wakhe. Le ngxoxo inthanethi futhi emenza igama esithi kumnandi duo LMFAO.
Ngokungena amabutho, Redfoo Sky Blu ngoJulayi 1, 2008, eyakhishwa i-albhamu yabo yokuqala, ethiwa «Party Rock e iTunes Store». Laba bobabili safinyelela nempumelelo enkulu, futhi ngo-November, uyisekazi nomshana wakhe ukudala isivumelwano Interscope ilebula. abadlali abasha captivate izilaleli olulodwa incendiary nevidiyo. Ukubona duo unamathisele zokubhukuda engavamile futhi inemibalabala, ngezinye izikhathi mhlawumbe iwubuphukuphuku. Ngisho zikhona izimo lapho amalungu duo uvele enkundleni e izikhindi amateki. LMFAO ayaqhubeka ekhona esikhathini esingeside.
Sky Blu futhi Redfoo e Duet ngesikhathi esifanayo ukudlala indima DJs, rappers, abadansi kanye abakhiqizi. Isihloko LMFAO - intokozo engapheliyo. Laba bobabili imzuzele eziningi udumo entsheni. Nokho, ngo-2012 lo duo LMFAO amakhefu, okusho ukuthi ukumisa amakhonsathi ngokuhlanganyela kanye ukudedela ama-albhamu. Sky Blu futhi Redfoo anqume ukuya ezindaweni ezihlukene.
Ngaphambi kokuwa iculo band ukuphotha njalo at disco. ungase uzwe amahlaya mayelana nenkampani ngayinye abasha «Ngingumfana ngiyakhanga futhi ngiyazi» - amazwi ingoma, ethiwa ngendlela efanayo. Lokhu olulodwa yayiyindawo wesibili e-US amashadi (Billboard Hot 100). Ngo izinhliziyo zalabo esifunda futhi abafundi uyohlale isigqi ashisayo Lmfao iculo, okusho ukuthi bayasethemba ukungafi merry duo umalume kaStefanu nomshana wakhe Skyler.
'Compound International "- isayithi abathandi wezolimo
182n, isitifiketi. Siza emholweni iminyaka engu-2: isampuli